Ndabere usoro: ndabere, weghachite sistemụ na ọtụtụ ndị ọzọ | Site na Linux
Ndabere usoro: Ndabere, weghachite sistemụ na ọtụtụ ndị ọzọ
Systemback bụ ngwa dị mfe ma dịkwa irè nke na-enyere aka ịmepụta usoro nkwado site na ijikwa faịlụ nhazi ndị ọrụ. Ma ọ bụrụ na enwere nsogbu, ịnwere ike weghachite steeti nke sistemụ arụmọrụ gara aga.
O nwekwara ọrụ ndị ọzọ bara uru dị ka mweghachi sistemụ arụmọrụ, nke enwere ike iji wụnye ya na ọkọ na ọbụna ịmepụta sistemụ arụmọrụ na usoro ndụ, ya bụ, "dị ndụ" ka a hazie ya, ma depụtaghachi ya na CD / DVD ma ọ bụ draịva USB.
Kemgbe oge ikpeazụ a tụlere Systemback na DesdeLinux na a gara aga post, otu ihe emelitere nke ọma iji tụlee ngwa dị na steeti tozuru etozu ma onye mepụtara ya na maka ndị ọrụ na-eto eto nke ndị ọrụ.
1 Banyere Systemback
4 Ahụmahụ m
N'okwu okwu ya webụsaịtị na launpad na ya onye Mmepụta Kendek:
Sistemụ na-eme ka ọ dị mfe ịmepụta akwụkwọ ndabere nke sistemụ na faịlụ nhazi onye ọrụ. Bụrụ na nke nsogbu, ị nwere ike mfe weghachi gara aga ala nke usoro. Ọ nwere ọrụ ndị ọzọ dịka ịyingomi sistemụ arụmọrụ, ịwụnye sistemụ arụmọrụ yana ịmepụta sistemụ arụmọrụ na usoro ndụ.
Kwuru na ngwa enwere ike ibudata ya na weebụsaịtị Launchpad na Ebe nrụọrụ weebụ na-akwado. Enwere ike iji ya na usoro usoro ojiji nke “GNU General Public License version 3.0” (GPLv3).
Ya nwụnye usoro ka bụ nnọọ mfe taa na ị dị nnọọ ga-eso usoro kọwara site na ya kere, nke bu:
Maka ndị na-enweghị Distros na-enye ohere ịgbakwunye Ndozi ozugbo site na iwu "add-apt-repository" Nwere ike idezi faịlụ gị "Source.list" ma gbakwunye usoro nchekwa ndị a:
Mgbe ị na-ahazi ebe nchekwa gị aka, na-ebu ụzọ kwuo okwu na iwu "apt-key" iji wụnye ihe igodo nchekwa wee gbaa ọsọ a "Mgbakwunye nke ọma" imelite otu ihe. N'ikpeazụ, jiri iwu iwu mee ihe nrụnye ngwugwu ahụ "Apt wụnye systemback".
Dabere na Distro ebe ịnwa ịwụnye "Systemback" ị nwere ike ịchọrọ ụfọdụ ụlọ akwụkwọ ụfọdụ ma ọ bụ nkwenye ndị ọzọ iji dozie. Na mkpokọta, enwere ike ịchọ ụfọdụ nchịkọta ndị a ka etinye ya na mbụ:
Enwere ike iji sistemụ rụọ ọrụ maka ọtụtụ ihe dị mkpa, dị ka:
Iweghachi Sistemụ nrụọrụ
Detuo sistemụ Na-arụ ọrụ
Nrụ Ọrụ Sistemụ
Okike okike nke sistemụ arụmọrụ
Mmezi sistemụ Na-arụ ọrụ
Mmelite sistemụ Na-arụ ọrụ
Ihe ndị a na atụmatụ ndị ọzọ na-eme ka Systemback bụrụ ihe bara uru itinye na Linux Distros.
Ọ bụ ezie na onye nrụpụta ya akwụsịla Nkwalite na Nkwado nke otu ahụ na 13/12/2017, ogo, arụmọrụ na ịdị irè nke ngwa a taa dị mma ma bụrụ nke obodo sara mbara na-arụ ọrụ na sọftụwia Free na GNU / Linux na obodo.
Amaara m ma jiri sistemụ rụọ ọrụ maka ihe dịka afọ 2 iji mepụta ISO nke obere nke sistemụ arụmọrụ m, nke a ga-eji dị ka omenala GNU / Linux Distro. Ihe mbu m mere bu itinye ya na ule DEBIAN.
Ntinye ya gara nke ọma, ma rụọ ọrụ ya arụmọrụ na-enweghị nsogbu ọ bụla. Emepụtara m omenala m ISO, mana maka ebumnuche amaghị, nke m chere na ọ bụ nsogbu nhazi nke Distro m, na obere pasent nke kọmpụta ndị ISO ebilighị ndụ (ndụ) ka arụnyere.
Taa, m na-eji Systemback eme ihe nke ọma dị ka onye nrụnye isi nke Distro m ugbu a na-akpọ "MinerOS GNU / Linux" nke bụ Distro dabere na "Ubuntu 18.04" jikọtara ya na Distro "MX Linux 17".
Systemback arụ ọrụ nke ọma 100% nke oge na ụdị ụdị ngwaọrụ a nwalere, nke m kwuru na ezigbo nkwado nke ngwa na ọba akwụkwọ nke Distro "MX Linux 17" weta na "Ubuntu 18.04".
Mụ onwe m kwadoro iji Systemback mepụta omenala nke gị Distros site na sistemụ arụmọrụ gị arụnyere.
N'ikpeazụ, m hapụrụ gị vidiyo a ka ị hụ otu esi eji Systemback maka ebumnuche a:
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ » Ndabere usoro: Ndabere, weghachite sistemụ na ọtụtụ ndị ọzọ
Dị ka ọ na-adị, akụkọ magburu onwe ya mana enweghị nsụpe nsụgharị na ụtọ asụsụ.
Ngwa na-adọrọ mmasị.
Ekele na ngọzi enyi, ajụjụ m amatala etu esi arụ ọrụ nke sistemụ mana mgbe ị wụnye livecd ahụ emere ya na mbido sistemụ na-arịọ maka nyocha ma anaghị m agbanyụ ya mana iwepu sistemụ ahụ mgbe etinyere na diski ma ọ bụ igwe ọhụrụ ahụ, ma ọ bụrụ Know maara banyere usoro repo nke sistemụ maka debian maka na ebudatara m na debs
Ekele Eddy! Ee, Systemback na-ajụ maka nyocha iji banye ma na-agba ọsọ (ntinye) nke onyonyo emepụtara, mana enwetụbeghị m ike iwepu ya, yabụ, amaghị m ihe m ga-agwa gị maka ya. Banyere nchekwa, nke a bụ njikọ: https://launchpad.net/~nemh/+archive/ubuntu/systemback
NOOBS: wụnye otutu sistemụ na pipo gị na ngwa ọrụ a